I-LA CONDOR-LUXUEUX CHALET DES LAURENTIQUES-SPA-LAC - I-Airbnb
I-LA CONDOR-LUXUEUX CHALET DES LAURENTIQUES-SPA-LAC
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSophie
Kumbindi weLaurentians, eseSainte-Marguerite-du-Lac-Masson nguLac Croche, le ndlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga ikunika ubunewunewu nobutofotofo, kwindawo ebangel 'umdla. Ukuba ufuna ukuzola entlango...
Ngamafutshane, yonke into ikhona ukuze ube nexesha elimnandi elingasoze lilibaleke!
* * * Ngenxa yeCOVID-19 kunye nemiyalelo yempilo yoluntu ekhoyo ngoku, izithintelo zisenokusebenza.
Inombolo Yokusebenza yeCITQ: 243670
Ihonjiswe kakuhle, indlu inamagumbi okulala ayi-5, amagumbi okuhlambela amathathu, i-spa yangaphandle yabantu abayi-6 ababona ichibi, indawo yokubasa umlilo enkulu eyenziwe ngamatye, ikhitshi lale mihla elinento yonke, itafile yokuqubha kunye negumbi lemidlalo kwigumbi elingaphantsi eline-satellite TV, ibhafu ejikelezayo kwigumbi lokulala elikhulu kunye neendawo ezi-2 zabucala. Konke kukwindawo ebangel 'umdla! Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga ineefestile ezintle kakhulu ibe imbonakalo isemagqabini.
4.88 · Izimvo eziyi-199
ICroche Lake yindawo ethe cwaka nezolileyo ekumgama wemizuzu eyi-10 xa usuka kwilali.